Ahịa anyị ndị a na-echefu echefu | FXCC Blog
Ihe omuma anyi kacha echefu
Apr 17 • N'etiti ahịrị • 7666 Echiche • Comments Off na ahia anyị kacha echefu echefu
Mgbe anyị na-ajụ ajụjụ otu ìgwè ndị ahịa; "Olee ihe ndị ị na-echetụghị echefu?" Anyị na-ezutekarị azịza ndị dịgasị iche iche na-adabere na ebe ndị ahịa na-enwe usoro mmụta mmepe nke onwe ha. Azịza ndị anyị ga-enweta site na: ndị ahịa ọhụrụ, ndị ahịa bụ ndị malitere ịzụlite atụmatụ azụmahịa yana atụmatụ aghụghọ nke na-arụ ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa na ndị nwere ọganihu ga-adị iche n'ụzọ dị ịtụnanya. Ma ọ bụ ihe dị mkpa dị mkpa na ihe ha na-anọchi anya na anyị chọrọ itinye uche na ntinye akwụkwọ a.
Otu 'ahia' di iche iche anyi choputara maka ebumnuche nke ihe omuma a na azịza anyi nataghachi ga-achota otutu ebe anyi no dika ndi ahia ahia, ihe anyi matara dika ahia ndi ozo na-agbanwe n'uzo di oke ka anyi tozuru oke dika ndi ahia. . Maka ndị ahịa ọhụrụ ha nwere ike ịmepụta mmeri ukwu mbụ dịka ahịa ha kacha echefu echefu, ebe ndị ọkachamara nwere ahụmahụ karị na obodo anyị ga-enwe nhazi dị iche iche nke ga-ekpe ikpe ahịa ha kacha mma. Nke bụ eziokwu bụ na ndị nwere ahụmahụ n'etiti anyị nwere ike ọbụna ịga n'ihu iji gosi ọrụ ndị kasị njọ ha na-efunahụ dị ka ihe kachasị echefu ha, ebe ndị ahịa a nyere ihe mmụta karịa ndị mmeri. Nke a ga-abụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ndị ahịa ndị a na-efunahụ bụ n'ihi nchịkwa ego na-adịghị mma, ma ọ bụ nchịkwa ego na-eduga ná nnukwu ụgwọ karịa ka a gaara ata ahụhụ.
Ndị ahịa ọhụrụ
Mmeghachi omume nke ndị ahịa ọhụrụ mgbe a jụrụ ajụjụ a ga-abụ ịkọwapụta nkọwa ha na ahịa ha kacha baa uru, ma ọ bụ ahịa mbụ ha na-emeri, ma ọ bụ ahịa ahịa ha kachasị ọhụrụ. Ma mgbe ha kwadoro ihe niile mere ha ji were ahia ahụ, otu esi ejikwa ego ha, ihe mere ha ji apụ na ihe ndị ọzọ, nkọwa ndị ahụ ga-atụle na ezughi oke, na-atụ aro na ọganihu ahịa na-abawanye na mberede kama imewe ya.
Ọ bụrụ na anyị jụọ ajụjụ ndị ahịa ahụ ọhụrụ gbasara atụmatụ azụmahịa ha; "Ọ bụ ahịa ahụ dị ka akụkụ nke atụmatụ atụmatụ ahia ha?" Anyị nwere ike ịchọta na oghere. Na nkenke maka ọtụtụ ndị ahịa ọhụrụ ahịa ndị a na-echefu echefu na-eme ka ha nwee obi ụtọ karia imewe. Otú ọ dị, ịhapụ nchekwube nke na-abịa na ahịa ndị nwere ọganihu ma eleghị anya ọ bụ ọtụtụ n'ime ahịa ndị na-efunahụ ndị ahịa anyị na-emesị nọdụ ala na-ahụ ma na-agbanye uwe ha iji malite ịzụlite usoro ịzụ ahịa ma tinye usoro ahụ n'ime mpempe akwụkwọ Atụmatụ ahịa atụmatụ, ma eleghị anya ọ bụ ahịa kachasị njọ anyị mụtara ọtụtụ n'ime ụbọchị ahịa anyị.
Ndị ahịa nwere ike ịmalite ịmalite ọ bụghị nanị na ha chetara ọrụ ahịa ha ndị a na-echefu echefu ma ha nwere ike icheta ihe mere ha ji were ahia ahụ na ihe ọzọ mere ndị ahịa ahụ ji nwee ọganihu. Ha nwere ike ịmalite ịmalite nyocha usoro aghụghọ dị iche iche ma na-etinye aka na atụmatụ ndị ahụ n'ime ihe ndị bụ ntọala nke atụmatụ ahịa. Onye ahia anyi na-agba oso ka ga-enwe ike igosi aka ahia ha a ma ama di ka onye 'bu akpa' pips.
Ndị ahịa ahụmahụ
Ndị ahịa anyị nwere ahụmahụ nwere ike ịgbasi mbọ ike icheta ọrụ ahịa ha ndị a na-echefu echefu ka ikpe ha mara ihe na-anọchite anya ahia a na-echefu echefu gaara agbanwe n'ụzọ dị ukwuu n'afọ ndị gara aga. N'ebe ọ bụla ha ga-enwe obi ụtọ ahụmahụ dị ukwuu nke ịzụ ahịa na ahia onye ọ bụla, nhazi ha ugbu a maka ikpe ikpe ahịa na-echefu echefu nwere ike gbanwere dịtụ na ọbụna gụnyere ndị ahịa na-efunahụ dị ka ihe ncheta ma ọ bụrụ na ndị ahịa a bụ akụkụ nke atụmatụ atụmatụ atụmatụ na ọnwụ ewere ya n'ọnọdụ nke uru ka ukwuu n'ahịa ọzọ. Onye ahịa anyị nwere ahụmahụ nwere ike icheta oge ụfọdụ banyere ọrụ ndị ọzọ dị egwu ha na-arụ n'oge ọrụ ha, ma a ga-echeta ndị ahịa ndị a n'echiche nke oge a na-achọghị ahụ kama inwe mmetụta ọ bụla ọzọ.
Ezi afọ ojuju nke ndị ahịa ahụ nwere ahụmahụ ga-enwe ntakịrị ihe na-eme na pip ma ọ bụ isi uru dị ka onye ahịa nwere ahụmahụ kachasị mmasị na ngụkọta ego nke akaụntụ ha na ihe mgbaru ọsọ ha setịpụrụ. Ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ ha dị ka usoro atụmatụ ha si dị ma dị ka ihe si na-agabiga ọnwụnwa nke imebi ya, ahịa ndị na-emeri ma na-efunahụ aghọwo ihe na-echeghị echefu na ọkwa dum nke uru. N'ezie, otu nchegbu nwere ike ịbanye n'obi ndị ahịa ahụ nwere ngwa ngwa mgbe ha nwetasịrị pips ma ọ bụ isi ihe dị iche iche site na ahia / ịzụ ahịa ebe ahịa nwere ike ịbụ nnukwu ihe, ma nchebe nwere ike ịbanye n'oge nkasi obi ma ọ bụ na-egosi ihe anyị na-ekwu okwu ụgha.
" Isi ala USA na-ebili ka ndị na-achụ ego na-asụgharị okwu Janet Yellen dị ka ihe dị mma maka ahịa Solid Wall St. nwetara ụnyaahụ adịghị ebuli ahịa Asia dị ka ahịa ndị Europe na-emepe ala ka nsogbu Ukraine dị oke egwu »